मा रहेको छ यो चक्रको कुन दिन महिला र मा ovulation के हो?
यो महिला के ovulation थाह नगर्ने मानिस हाम्रो संसारमा पाउन गाह्रो छ। यसलाई वर्तमान पुस्ता थप प्रबुद्ध र liberated भएको छ कि छैन भन्छन्। वास्तवमा, बालिका आफूलाई यस्तो कुरा, हरेक व्यक्ति जान्नु आवश्यक सक्नुहुन्छ बारेमा र उल्लेख छैन। के व्याख्या गर्न महिला मा ovulation र यो नै कसरी प्रकट, हामी हाम्रो लेख, विस्तार मुद्दा छलफल हुनेछ जो पढेर सुझाव। यो जानकारी तपाईं बालिका को प्रकृति बुझ्न र शायद यो पनि "विशेष" दिनमा आफ्नो साझेदार संग सम्बन्ध सुधार गर्न सक्षम हुनेछ।
Ovulation - कि, नारी शरीर मा हुन्छ एक प्रक्रिया fallopian ट्यूब बाहिर निकाल्छ ripened पुरुष शुक्राणु को माध्यम द्वारा fertilized सक्छ जो ovum गर्न ovaries जहाँ। र किन यसलाई गर्भवती बन्ने सपना जो एक केटी को लागि यति महत्त्वपूर्ण छ जो सधैं पाकेको धेरै लाखौं केवल एक। सामान्य चक्र मा, यो एक दिन र तुरुन्तै बारेमा 14 मिनेट fallopian ट्यूब मा "पठाइएको" को लागि परिपक्व। अर्को शब्दमा, ovulation दिन - यो जुन बेलामा अन्डा एक शुक्राणु द्वारा fertilized सकिन्छ 24 घण्टा, छ, र यो दिन एक बच्चा गोदभराई सबैभन्दा उपयुक्त र सफल मानिन्छ कि। तर त्यो दिन पछि, गर्भवती रही सबै एक महिलाको संभावना शून्य छन् भन्ने लाग्छ छैन। को fallopian ट्यूब मा कारगर spermatozoa (-7दिन बाटो, आफ्नो जीवनको अवधि द्वारा) हो यदि अन्डा पहिले र ovulation पछि fertilized हुन सक्छ।
थाहा के महिला मा ovulation, भनेर याद यो अवधिमा हामी ती, केटी धेरै राम्रो गर्न थाल्छ, त्यो मूड उठाएर पनि स्मृति सुधार। यो सबै फेला पार्न र सम्भाव्य साझेदार को अन्डा खाद गर्न सक्षम आकर्षित गर्न शरीर बनाउँछ। तर, माथि को सबै को अभिव्यक्ति बालिका धेरै तरिकामा ovulation ग्रस्त किनभने, विशुद्ध व्यक्तिगत छ। केही उदाहरणका लागि, पूर्ण पूरा गर्न असम्भव छ, जो यो अवधि, समयमा बलियो यौन लैंगिक उत्तेजना महसुस गर्छन्। अरूलाई, यसको विपरीत, इच्छा लगभग पूर्ण अनुपस्थित छ किनभने ती दिनमा सेक्स गर्न छैन गर्छन।
गणना ovulation मा चक्रको कुनै पनि दिन हुन्छ, यो भने मात्र सम्भव छ menstrual चक्र जो केवल 20-24 वर्ष पूर्णतया हासिल छ, पूर्ण र स्थिर छ। यसलाई निरन्तर यो बिन्दु परिवर्तन छ, र केहि लगभग असम्भव छ भनेर निर्धारण। जो ovulation मा दिन गणना गर्न चाहने ती मद्दत गर्न, त्यहाँ सामान्य (गर्भावस्था) धेरै समान छन् भन्ने विशेष परीक्षण हो। अवधारणा लागि सबैभन्दा सफल समय निर्धारण - केही अनावश्यक गर्भावस्था र अरूको जोखिम निर्मूल गर्न तिनीहरूलाई किन्न। परीक्षण प्राथमिकताको एक दुई पटक दिन, को menstrual चक्र बीचमा सञ्चालन, र त्यो अवधि गर्दा थाहा मद्दत गर्छ छ। महिला के ovulation राम्ररी थाह, तपाईं आफ्नो पद र स्वतन्त्र दिन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, चक्र को बीचमा मा मलाशय मा तापमान मापन। यो जोडले खस्छ ovulation अघि दिन।
प्लेटलेट: महिलाहरु मा उमेर द्वारा उमेर (तालिका)। असामान्य कारणहरूको कारण
को रोगाणु कक्षहरू र प्रजनन मा रक्सी को प्रभाव
Rectoscopy: यो के हो? परीक्षा र आचरणको हेरफेर लागि तयारी
दर्शन र चिकित्सा: सम्बन्ध
Robertsonian translocations: वर्णन, सुविधा र को विशेषताहरु
सेनेगलकी बुनाई braids: सुन्दर बाहिर खडा
कसरी जाँच गर्न र शीर्ष अप: "तीर" कार्डको ब्यालेन्स? एकीकृत परिवहन कार्ड "तीर"
फ्रेम स्नान - समीक्षा। परियोजनाहरू फ्रेम स्नान
Platonic प्रेम - यो के हो?
सामाजिक समुदाय: यसको परिभाषा, संरचना, महत्व
रूसी correctional संस्थाहरू
रोमन Grozhan - दौडने "सूत्र 1"
ग्रिल मा झिंगा - एक वास्तविक प्रलोभनको
रासायनिक तत्व टिन। गुण र टिन को आवेदन